Sidee ayaan wiilkayga uga helay Venezuela - Geofumadas
Politics iyo Dimuqraadiyadda
Sidee ayaan wiilkayga uga soo baxay Venezuela
Febraayo, 2019 Politics iyo Dimuqraadiyadda
Ka dib markii uu goob joog ka ahaa xaflad loogu talagalay gargaarka bani'aadamnimada ee Venezuela, waxaan go'aansaday inaan ku soo gabagabeeyo qoraal ah in aanan awoodin inaan dhammeeyo. Haddii aad akhrinayso daabacaadda, ku saabsan My odyssey in uu ka tago Venezuela, hubso in ay ka tagay xiisaha si ay u ogaadaan sida ay u ahayd dhammaadkii safarkayga. Dhibaatada safarka ayaa sii socotay, waxaan u sheegay in aan awoodey inaan iibsado tikidhkayga baska Cúcuta oo ugu dambayntii haystay baasaboorka. Wanaagsan, maalintii xigtay waxaan baska u raacnay Rumichaca - xuduud la leh Ecuador - safarku waxay ahayd saacado 12, waxaannu tagnay 2 subaxdii. Hore ee terminalka Ecuadorian, waa inaan sugaa laba maalmood oo dheeraad ah safka; Markii aan gaajooday, waxaan bixiyey 2 $ qadada aan ku leeyahay: digaag broaster oo bariis ah, salad, chorizo, digirta cas, fries fransa, Coca-Cola iyo macmacaan macmacaan
-Cuntadaasi, aniga ahaantii waxay ahayd midka ugu fiican safarka-.
Ka dib markii qadada, waxaan ku bixisay taksi Rumichaca Tulcan, waxaa ka ahayd in aan si Guayaquil iyo Quito tago, si aannu la yaab ma jirin basaska fulinta in ay labada goobood, si ay u sii haysan sugaya qaaday bas aan qabto wax ee raaxada. In this badan oo amar shaqaalaha, booliska iyo ilaalada booday weydiinaya haddii ay jiraan kuwo Colombians baska -Marnaba ma ogi sababta - Waxaan sii wadnay safarka, waxaan tagnay garoonka Quitumbe waxaanan baska raacnay Tumbes, imaanshaheena ayaan maalin kale ku sugnaa baska ilaa Lima, laakiin ma sugin wax intaas ka badan, waxaan go'aansanay inaan bixinno taksi kale. Waxay adeegsadeen saacadaha 24 ee wadada, illaa dhammaadka, waxaan bas ka qaatay qaybta koonfureed ee magaalada Lima, halkaas oo aan hadda ku noolahay.
Waxay ahayd bilood shaqo adag, shaqo culus dhihi lahaa, laakiin xaqiiqda ah ee haysta awoodda wax iibsiga si loogu bixiyo adeegyada, jiif, cunto iyo mararka qaar oo maaweeliya, aniga oo dareensan tahay in dadaal oo dhan waa qiimo. Wakhtigan, ayaan lahaa shaqooyin badan, sida ay yidhaahdaan dalkaygii ku dhinteen Shabeel kasta; ka iibinta nacnaca ee shidaalka ah qaybiyo, kaaliyaha kariyo makhaayad, dhacdooyinka amaanka, ka dib markii Santa Claus gargaare ee Westgate, wax badan oo aan ku sameeyey si loo badbaadiyo rakaab iyo kharashyada ee wiilkayga.
Waxaan hooyaday u sheegay in sababaha dhabta ah ee dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulsheedba, inaanu sii wadi karin inaan wiilkeenu korinno oo horumarinno deegaankaas. Inkasta oo hooyadeed iyo aniga aan yaraa, waxay igu raacday in ay ahayd wax sax ah isaga iyo mustaqbalkiisa.
carruur ka badan maalin kasta waa, wareegaya jidadka Venezuela, dhowr guriga ka baxdo si ay u caawiyaan, qaar kalena la doonayo in ka tago qaybtooda oo cuntada loogu talagalay carruurta ka yaryar, kuwa kale sababta oo ah xaaladda ayaa sababay murugada iyo caafimaadka maskaxda Dhibaatooyinka guriga -Waxay jecelyihiin inay ka fogaadaan guriga- qaar kalena waxay ku hawlan yihiin dembiga. Dad badan oo aan waxba galabsan waxay qoraan carruurta si ay u isticmaalaan dhacdooyinka, iyagoo beddelaya saxan cunto iyo meesha la seexdo.
Maadaama aad ogtahay, dhibaatada Venezuela kaliya ma aha dhaqaale, waa siyaasad, waxa ay gaartay xaaladaha ugu caansan, tusaale ahaan, sida wiilkeygu u haysan baasaboor cusub; waxaa lagu tijaabiyay marinada joogtada ah si ay u codsadaan mid cusub, haddii aysan suurtagal ahayn, doorashada kaliya ee ahayd waxa loogu yeeray kordhinta, taas oo u oggolaanaysa baasaboorka in la kordhiyo muddo laba sano ah. Waa hagaag, ma aanan maareynin si aan u fulino nidaam fudud oo fudud, waxaan ku qasbanahay inaan bixiyo wadarta 600 U $ D maamulaha wakhtigaas, kaas oo igu ballan qaaday inaan soo saaro kordhinta.
Carruurta iyo dhallinyaradu waa kuwa ugu dhibaatooday xaaladdan, intooda badani waxay ogaadeen noloshooda gaaban, gaajo sababtoo ah kheyraadka la'aanta iyo karti-darrada adeegyada aasaasiga ah. Qaar badan ayaa sidoo kale ku khasbanaaday inay tagaan shaqada, iyagoo ka tagaya sicir-dhimista dugsi-dhigashada dugsiga oo aad u sarreeya sannad walba, sababtoo ah waxay u baahan yihiin inay helaan hab lagu caawimo guriga.
Horeba waxa ugu muhiimsan - baasaboorka - waxaan bilaabay warqadaha, taas oo ah, oggolaanshaha safarka, tan iyo intii wadamo badan oo kale; Dhallinyaradu kama bixi karaan dalka iyada oo aan oggolaansho saxeexin labada waalid oo ay ansixiyeen hay'adda awoodda leh. Waa inaan bixinnaa boosteejo cad, si aan u saxeexo waraaqaha u dhiganta oo aan awood u yeesho inaan keeno.
Hooyadeed ayaa go'aansatay in ay la timaaddo isaga, waxaan sharaxay in aan kaliya taageerayo iyada marka aan imid, madaama aan xadidnahay inaan daboolo kharashyada wiilkayga. Aqbalida shuruudaha, oo awood u leh inuu badbaadiyo inta uu awoodi karo, -Xitaa waan joojiyay in aan wax cuno maalmo- Waxaan ka codsaday in ay iibsato tigidhka, iyadu waxay daryeelaysay.
Markii aan ka tagay Venezuela, waxaan miisaaminay wadarta 95, maanta miisaankiisu waa 75 kg, xaaladaha walbahaarka iyo xaddidaadaha, waxay saameyn ku yeelatay miisaankeyga gebi ahaanba.
Ilaah baa mahad leh, tikidhada ma iibsanaysay isla terminal aniga oo kale, waxay igu orday nasiibkii aan ku bixin lahaa bas bas ah oo u socdaalaya San Cristobal, halkaasna waxay ka qaateen taxi si San Antonio del Táchira; Halkaas ayay habeenkii ku qaateen hudheel, waa inaad fahamtaa sida ay u adag tahay inuu u noqdo nin -wiil dhalinyaro ah- Hirgalinta habka safarka oo dhan. Waa mid aad uga duwan waxa qof weyn ugu adkaysan karaa, maalmood iyo afartan habeen ee u furan, laakiinse anigu uma aan ha laga yaabaa wiilkayga iyada oo xaaladda isla tago, gaar ahaan marka aan, ma aan ogayn waxay wajihi lahaa waqtiga si Cucuta socday.
Maalintii xigtay, waxay qaateen taksi hore loo kireystey si ay u geeyaan xuduudda, halkaa, sida inaan sugo laba cisho, waqtigan ma ahan dad ay doonayaan in ay ka baxaan Venezuela, markan waxa uu ahaa qalad koronto loo ogolyahay inuu isku xiro macluumaadka maamulka SAIME, si uu u sameeyo habka xidhitaanka.
Marka laga shaabadeeyey marinka, waxay la xidhiidhay qofka i caawiyey, oo iyaga siiyey cunto iyo hurdo u ilaa maalinta ku xigta. Waxay iibsaday tikidhada ilaa Rumichaca, waxaa bilaabay jug ah, ayaa dad badan Venezuela lahaa ugu yaraan 4 maalmood si ay u tagaan Ecuador, dhibaatada uu ahaa in dowladda Ecuador soo saaray maalmahan qoraal ah oo la tilmaamayo in kaliya uu doonaynin soohdinta kuwa Venezuela oo lahaa baasaboor
Waayo, wax Ilaah, oo aan wax badan oo dib u cusboonaysiinta baasaboor dadaal ku bixisay, mana ihi la rogmato, waxa dhici lahaa haddii ay kaliya kaarka aqoonsiga iyada oo loo adeegsanayo dakhliga. In Rumichaca waxay iibsadaan tikidhada Guayaquil, markii ay yimaadeen waxay habeenkii habeenkii ku qaateen hudheel kale oo qadarin leh, gaar ahaan meel la seexdo. habeenkaas, oo dhan oo ay weyddiisatay hooyadeedna waxay ahayd wax ay cunaan iyo wax helay gaadhi iibinta empanadas cagaaran, waxay ahayd cajiinka bur cufan hilib iyo muuska cagaaran jiis ah, taasi waxa weeye waxa aan lahaa casho.
Maalintii xigtay waxaan u yeeray, wuu daalanaa, waan xasuusinayaa inaan u sheegay - Aabe soomaali ah, waxay doonayaan inay yimaadaan, wax yar baa loo baahan yahay -, isku dayayaan in ay fududayso uu daal yididiiladda. Ka maqan in ka badan saacadaha 4 iska, bas si Tumbes, waxa uu ahaa ku fuushaa degan ka dib oo dhan, baska dhintay oo la seexday wax yar-in Jid yar ka badan 20 qasdin hours- iyo Waxay joogeen meeshii ay tikidhada iibsanayeen ee Lima.
Wiilkeygu marna ma uusan aheyn ilmo ka cabanaya, wax aan waxba galabsan, ama hooyadiis ama aniga ilaahay, wuxuu aad u adeecaa oo ixtiraamaa, xaaladdan wuxuu ku dhihi lahaa inuu ahaa nin geesinimo leh. Iyadoo sanadihii 14 oo kaliya uu la kulmay xaalad ah awoowe oo ku noolaa, Talyaani ah oo tagay Venezuela isaga oo baxsaday dagaalka, marna ka tegin -halkaas ayuu ku dhintay- Xaaladda taas oo sidoo kale qaar badan oo Latinos ah iyo kuwa yurubiyan ah.
Hadda hooyadeed waxay u shaqaysaa sida gabadha adeega -nadiifinta-, ka dib markii la dhammeeyo maalinta iibisa nacnaca saldhigga gaaska -Waxay sidoo kale ka qayb qaadataa qaybteeda caafi- maadka ilmaha- ka dibna ... waxaan u sheeg in in yar ka yar 6 bilood ee dugsiga isaga dhowr maalmood ka hor siiyey aqoonsi in ay "ilmaha u dhiibay in waxbarashadeeda, saaxiib wanaagsan iyo qof weyn." Waxa uu ku dhameysatay sannadkii uu dugsiga sida ugu horeeyay ee noociisa ah, iyo kuwa kibirka leh in ay qeyb ka tahay horumarka wanaagsan, in aan maalin kasta ku nool dhib, walaaca iyo cabsida. Anigu weli si adag ayaan u shaqeynayaa, -waxay u tahay hooyo, mustaqbalkayaga.
Ugu dambeyntii, si ay editor egeomates, kuwaas oo ka akhriyin, wakhtigaygu markii aan u shaqayn jiray dawladda jimicsi aan xirfad iyo mahad roonaaday i siiyey fursad ay ku daabacaan qoraal in ka tago arrimaha geomatics; laakiin taasi kama tagayso qoraalladiisa markii uu ka hadlayay dhibaatada Honduras.
Post Previous«Previous 3 News iyo 21 munaasabadaha muhiimka ah ee ku jira GEO - Xajinta 2019
Post Next 5 Murtida iyo 5 xaqiiqooyinka isdhaafsiga BIM - GISNext »
Hal Jawaab u Jawaab in "Sida aan wiilkeyga uga helay Venezuela"
A READER isagu wuxuu leeyahay:
Tag Colombia, waxaa jira murugo isku mid ah! Maxaa shuruud la'aan ah!